PUBG Hacks ats Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Ihe niile PUBG Hacks ị chọrọ, dị ka Aimbot, Wall Hack, ESP, No Recoil, na ọtụtụ ndị ọzọ. N'iji atụmatụ karịa ndị ọzọ na-eweta mbanye anataghị ikike gburugburu, nke ahụ bụ ihe na-eme ka anyị bụrụ onye nrụpụta kachasị mma nke PUBG hacks n'ịntanetị.
Boughtzụtala PUBG mbanye anataghị ikike? Chọta usoro ndị ọzọ ebe a
Biko rụba ama: Tupu ị zụta hapu PUBG anyị, gbaa mbọ hụ na ngwa ọrụ ị na-achọ ịzụta ka emelitere nso nso a ma ọ bụ ka dị n'ịntanetị. Ọ bụ ezie na anyị na-emelite ngwaọrụ anyị oge niile, ọ na-egbu oge n'oge nnyefe n'ọnọdụ ụfọdụ; mgbe ọ na-abụkarị ozigbo, ọ nwekwara ike were awa ole na ole. Ngwaọrụ anyị niile akpọchiri akpọchi HWID, nke pụtara na ị ga - eji ya naanị otu kọmputa - gbaa mbọ hụ na kọmputa gị dakọtara na ngwa anyị niile tupu oge eruo. Agaghị enye nkwụghachi ụgwọ ọ bụla ozugbo ilele igodo ngwaahịa ahụ!
Ndi A Huru Anyi PUBG Hacks
PUBG Hacks, Aimbot, Norecoil, ESP, Wall Hacks & Ọzọ
ịzụta PUBG Hacks na 4 nzọụkwụ
Họrọ egwuregwu ị chọrọ ịbanye na ya, ebe anyị nwere ọtụtụ nhọrọ ebe a na Gamepron.
Lee maka mbanye anataghị ikike na suut gị mkpa kasị mma na ịzụta a ngwaahịa isi ya!
A na-akwụ ụgwọ niile a na-akwụ ebe a na Gamepron site na usoro ịkwụ ụgwọ anyị na-echekwa echekwa.
Nweta ohere gị Key & Budata PUBG Hacks!
Ozugbo ịzụrụ ịnweta igodo ngwaahịa, ịnwere ike iji ya budata ngwa PUBG anyị ozugbo.
Gini mere eji eji Gamepron PUBG Hacks?
Site na mwepụta nke Patch 13.2, anyị ahụla mmelite ọdịnaya dị mma maka PUBG, yana mgbakwunye ngwa ọgụ ọhụrụ dị ka P90 SMG, nke enwere ike ịhụ naanị na nchịkọta nlekọta. Yana P90, mmelite ọhụrụ ahụ nwere Hyundai Porter, nke bụ ụgbọala pikọp dị naanị na maapụ egwuregwu Taego.
Melite 12.2 maka PUBG na -egosipụta maapụ ọhụrụ edobere na South Korea nke a maara dị ka Taego, site na iji maapụ a, ndị mmepe agbakwunyela n'ụgbọ ala na ngwa agha dabara adaba. Ewepụtakwara ọnọdụ egwuregwu Comeback BR ​​site na mmelite a, ọ na -enyekwa ndị egwuregwu ohere ịlaghachi n'ime egwuregwu ma ọ bụrụ na egbuo ha n'isi ụtụtụ na egwuregwu.
Maapụ ọzọ maka PUBG ga-abụ Taego, a na-amakwa ya njakịrị na ụgbọala na-adọkpụ na-egosi ụdị atụmatụ ndị egwuregwu nwere ike ịtụ anya ịhụ mgbe ọ mechara wepụta. Fọdụ n'ime ihe ndị a ma ama na mmelite ahụ gụnyere ọtụtụ ngwa agha Korea na ụgbọ ala gụnyere egbe egbe K2 yana Hyundai.
Nwelite PUBG nke 11.2 lekwasịrị anya na ịgbakwunye Survivor Pass na egwuregwu ahụ, mezue ya na mbụ ya: Pajama Party. Dị ka ị ga-ama si aha, ntecha na a na-niile na-elekwasị anya na a pajama aesthetic. Nke a abụghị naanị mgbakwunye na mmelite ahụ, agbanyeghị, dịka ọ na-egosipụta ụfọdụ mgbanwe na àkwà mmiri na Erangel.
PUBG bụ egwuregwu ga - eme ka ị chee n’onwe gị, mana iji PUBG Hacks ga - eme ka ị hụ ihe ịga nke ọma n’egwuregwu ọ bụla. Gamepron raara onwe ya nye nye ndị ọrụ ahụmịhe pụrụ iche nke ga - enye ha ohere imeri ọtụtụ egwuregwu PUBG kamakwa ịnụ ụtọ oge ha na - egwu egwuregwu ahụ. Ebumnuche ka ị nwee obi ụtọ ma zuru ike mgbe ị na-egwu egwuregwu vidio, mana oge ụfọdụ ịchọrọ iji ya dị ka mpi mpi ma hapụ ya - nke a bụ ebe PUBG Hacks na-abanye, ebe ọbụnadị ndị egwuregwu kachasị egwu ka nwere ike ndị nwere nkà na egwuregwu ma pụta na mmeri.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ga-agbarụrụ ihu na aghụghọ, a ga-enwe otu ndị mmadụ na-eme ihe ọ bụla iji merie! Enwere ọtụtụ ihe ị ga-akwanyere ùgwù maka ịchọ imeri egwuregwu gị niile, agbanyeghị na ndị otu gị nwere ike ọ gaghị ama ya, iji PUBG Hacks anyị ga-enyere ha aka.
Atụmatụ ndị dị na PUBG Hack enweghị ike ịmegharị, ọ bụ ezie na ị ga-ahụ ọtụtụ hacks ndị ọzọ na-azọrọ na ha na-eme otu ihe ahụ, ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ha ga-eme ya na ogo nke ị nwere ike ịnweta ebe a na Gamepron. Anyị anaghị anwa ịpụpụta aghụghọ ma tụlee uru dị ka o kwere mee n'ihi na ọ bụrụ na ọ dị, anyị agaghị enwe ọnụ ọgụgụ dị ole na ole maka hacks anyị! Naanị ihe anyị chọrọ bụ ndị egwuregwu kachasị raara onwe ha nye iji aghụghọ anyị, n'ihi na anyị maara etu ha ga - esi dị ike - ọ bụrụ na ịchọrọ ịrara onwe gị nye iji merie egwuregwu PUBG ọ bụla enwere ike, ịzụta igodo ngwaahịa na ibudata PUBG Hack anyị bụ ebe dị mma ịmalite .
Iji PUBG ESP anyị na-enye gị ohere idobe taabụ na mmegide ndị iro ma chọpụta ebe ha ga-esote. Ọ bụrụ n ’ị ga - eche echiche tupu ị mata ụzọ ha ga - aga, ị nwere ike iti ha ihe na ya - ọ bụ ebe ahụ ka ị gafere PUBG Aimbot anyị wee chụpụ ha na“ mpaghara ọchịchịrị ”
Mbanye anataghị ikike mgbidi PUBG (ESP)
PUBG Player information ESP (Aha, Ogwe ahụike, ebe dị anya)
PUBG Ihe ESP na nzacha
PUBG ịdọ aka ná ntị ndị iro
PUBG ọnọdụ kachasị elu (enweghị mbibi ọdịda mgbe arụ ọrụ).
PUBG ọkpụkpụ & ebumnuche igodo ahazi.
PUBG nwetaghachi onye na-akwụ ụgwọ
Ezigbo PUBG Hack atụmatụ
Site n'iji PUBG mbanye anataghị ikike nyere gị ohere ịnweta naanị nhọrọ anyị PUBG ESP, ha niile na-enye gị ohere inyocha ngagharị nke onye iro gị nke ọma.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-eweta mbanye anataghị ikike agaghị enye gị ọtụtụ ihe iji rụọ ọrụ, anyị nwere nhọrọ ESP dịka aha ndị ọkpụkpọ, Ogwe ahụ ike, na ọbụnadị anya ha!
Ihe ESP na - enye gị ohere ịchọpụta ihe egwu dị n’ụdị ngwa agha puru iche, yana ihe mgbawa na ihe ndị ọzọ ESP dị na PUBG Hack anyị.
Ndị na-agbapụ n'ụzọ ziri ezi ga-emeri, ọ dị mfe. Jiri PUBG aimbot ka ị gbanye okpokoro isi nke onye iro gị n'ime swiss cheese!
PUBG Bullet track (dị irè na mkpụmkpụ na etiti etiti)
Letschọta mgbọ iji nweta echiche doro anya nke onye iro gị kachasị mma mgbe niile n'ọnọdụ dị mkpirikpi / n'etiti, nke mere na anyị etinyela ya na PUBG Hack anyị.
Ọrịa nke na-agbapụ n'azụ? Ọ bụ nsogbu anyị niile na-eme, yana nke ị nwere ike izere iji atụmatụ ịdọ aka na ntị anyị.
PUBG mode dị elu (enweghị mbibi ọdịda mgbe arụ ọrụ)
Jkpụrụ Super Jump na-etinye ihe n'ọnọdụ, dịka oge ụfọdụ ị ga-eme ihe ọ bụla iji merie. Ọ dịghị ọdịda mmebi bụ lifesaver na egwuregwu dị ka PUBG!
PUBG ọkpụkpụ & ebumnuche igodo ahazi
Anyị PUBG Aimbot kwadebere maka ịmalite ọkpụkpụ na ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ nwere ike ịhazi, na-enye gị ahụmịhe ịme egwuregwu mgbe ọ bụla ịchọrọ.
PUBG aimbot anya nyocha
Nlele nlegharị anya na-adị mma mgbe niile ma a bịa na PUBG aimbot, ebe ị ga - ama ebe ndị iro dị ngwa! Zụta igodo ngwaahịa taa.
Mwepụ na nkwụghachi ụgwọ dị n'ime PUBG mbanye anataghị ikike, ma ihe ọzọ kpatara na ọtụtụ ndị egwuregwu etinyela okwukwe na Gamepron.
Bụrụ onye kacha mma PUBG Player na Gamepron
Ugboro ole ka ị hụtara onwe gị nọrọ n’oche ndị isi mgbe egwuregwu mechara? Ndị na-egwu egwuregwu n'akụkụ ụwa niile enweela nkụda mmụọ nke ndakpọ olileanya nke na-abịa mgbe ị ga-efunahụ egwuregwu PUBG, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nọ n'agba ikpeazụ na ọsụsọ na-agba uwe elu gị. Gamepron na-agbanwe egwuregwu ahụ, otu hacker na oge, ma oge eruola ikpebi akụkụ ị nọ.
Popular PUBG Hacks na Ndị aghụghọ
PUBG ESP na Wallhack
Ndị ọzọ PUBG Hacks na Cheats
PUBG Hacks na Ndị aghụghọ na-enye ọbụlagodi ndị egwuregwu novice nhọrọ nke asọmpi na "gbalịsie ike". Enweghị ihe ihere na ị dị mma n'egwuregwu kachasị amasị gị, yabụ na-ekwu okwu ọjọọ ndị na-asọpụrụ nkà ha mgbe niile adịghị mma - ọ bụ ezie na dị ka ndị na-egwu egwu, anyị ga-ewere ụzọ kachasị mfe gaa n'elu. Kedu ihe kpatara ị ga - eji nye nsogbu nke ịnwa ọsụsọ na egwuregwu PUBG ọ bụla, ebe ị nwere ike gbanye ha PUBG hacks ma lelee bots na - emere gị ihe niile?
Imeri bu ebum n’uche kachasi nweta dika ihe PUBG, ma o bu ya mere PUBG Hack jiri buru ihe ewu ewu. Onweghi ndi ozo na enye ndi mmadu ikike nke PUBG mbanye anataghị ikike, yabụ hapụ ndị mmepe ọ bụla nwere ike itinye ọtụtụ atụmatụ a n'ime ngwa nke aka ha! Ihe ewu ewu PUBG Hacks dị na ntanetị ga-eyi ihe na-abaghị uru ma e jiri ya tụnyere ngwaọrụ ndị dị ebe a na Gamepron, ị nwere ike ịnweta ha niile maka otu ọnụ ala.
Chee echiche banyere ugboro ole ziri ezi gị ahapụla gị na oge crunch, ebe ọ bụ naanị ndị fọdụrụ na gburugburu ikpeazụ ga-abụ ndị kwesịrị ya (na ndị na-agagharị agwakọta ole na ole). Mgbe ị matara na agba ikpeazụ ga-ejupụta na ndị nwere egwuregwu nwere nghọta, naanị ohere ị nwere bụ site n'ịgbapụ ya - mmeri egbe egbe na PUBG ga-abụrịrị akụkụ kachasị mkpa nke egwuregwu ahụ. Ọ bụrụ na ị gaghị emeri egbe, ị gaghị enwe ihe ịga nke ọma; nke ahụ bụ ihe anyị ji n'aka! Mgbe ịchọrọ ịmara na mgbọ gị nwere ebumnuche na-egbu egbu site na iji agbapụ ọ bụla, iji PUBG aimbot ga-abụ ụzọ kacha mma.
Na njirimara dị ka Ọkpụkpụ Prioritization na Auto-Aim / Fire, ndị na-emegide gị ga-akụ ala onwe ha mgbe ha hụrụ aha gị na ndepụta igbu. Enweghị oge iji chee na egwuregwu dị ka PUBG, yabụ nkenke ị ga-egwu mgbe ị na-eji PUBG aimbot ga-agbanwe ụzọ ị na-egwu.
Emere egwuregwu vidio iji kwụghachi ndị rụrụ ogologo oge ụgwọ ma ghọta echiche nke egwuregwu ahụ, mana ọ baghị uru oge ị na-egwu PUBG mgbe PUBG ESP na Wallhack na-arụ ọrụ. Ga-ama mgbe niile mgbe onye iro na-anwa ịkwado gị maka nrube obi, ebe ị nwere ike iji "ọhụụ x-ray" gị hụ ihe ọ bụla - opaque na solid solid are no match for the like of our PUBG ESP .
Nwere ike ịhụ ụdị ihe niile mgbe ịmegharịrị atụmatụ a, dị ka aha ndị iro na ọbụna ahụike ha hapụrụ! Nke ahụ bụ mmalite, n'agbanyeghị, dị ka ihe nzacha na nhọrọ ESP ndị ọzọ dị ka ngwa ọgụ na ihe mgbawa dị na mwakpo anyị PUBG. Ọ bụghị naanị na anyị jikọtara ngwa ọrụ naanị mejupụtara ebumnuche na-adịghị mma na mpempe akwụkwọ na-enweghị ike, anyị wepụtara nnukwu egbe maka nke a (enweghị oke ezubere!)
Sochie ndị iro gị na anyị akara ukwu atụmatụ, nke na-arụ ọrụ dị ka aha ga-atụ aro. You'll ga-enwe ike soro ndị iro gị site na isoro akara ukwu anyị mbanye anataghị ikike emepụta; I nwekwara ike ime ka mmebi a di elu ma mechie ihe ndi mmadu na-egbu. Anya hacks bara uru karịsịa na egwuregwu dị ka PUBG, ebe ị na-amaghị mgbe onye iro ga-esi n'azụ bịakwute gị! Na a anya mbanye anataghị ikike nyeere, ị nwere ike mgbe niile ịhụ otú nso onye iro bụ na ọnọdụ gị - naanị oge mmadụ ga-eru nso, bụ mgbe ị chọrọ ka ha.
Alingmebi mmebi ọzọ bara uru maka ọtụtụ ihe doro anya, nke mbụ bụ na ndị iro gị agaghị eji egbe egbe gị abanye ebe ọ bụla. You'll ga - ejide aka n’ọgụ ọ bụla na - ewere ọnọdụ, oge ụfọdụkwa naanị ị ga - ezuru gị iji merie mmeri gị.
Ọ bụrụ n’inweghị n’aka ihe ị na-achọ na mbanye anataghị ikike PUBG, mara na Gamepron nwere ihe ọ bụla na ihe niile ịchọrọ. Anyị na-na-emepe emepe hacks professionally ruo ogologo oge, na afọ anyị na-enwe ike na-ewu a usoro na-enye ohere ka anyị hapụ ndị kasị mma Ndị aghụghọ kwere omume. Chọrọ inwe uru na egwuregwu dị ka PUBG, mana mmadụ anaghị enwe oge zuru ezu iji meziwanye nkà ha ma kpọọ mgbe niile.
Ma ị na-anwa ịghagbu ndị mmadụ ma ọ bụ na ike gwụrụ gị nke ịhapụ ọtụtụ ihe PUBG gị, ị nwere ike ịtụkwasị obi ebe a na Gamepron iji kpọga gị n'ala nkwa ahụ. Gini mere ị ga - eji oge niile na - eme ihe mgbe ị nwere ike ịzụta otu igodo ngwaahịa anyị ma merie ndị egwuregwu kachasị mma na ụwa? Nwere ike iri nri ọkụkọ niile ị ga - achọ mgbe ị nwere Gamepron PUBG mbanye anataghị ikike, yabụ egbula - zụta igodo ngwaahịa ma bido taa.
PUBG mbanye anataghị ikike ajụjụ
Gịnị kpatara anyị PUBG Hacks
Ngwa PUBG anyị dị iche iche, dị ka ị nwere ike ịda. Aren't na-adịghị dị nyere ohere ụfọdụ ala-tier hacks mgbe ị na-ahọrọ na-aghọ aghụghọ na Gamepron, dị ka ị na-aga na-arụ ọrụ na nanị ngwaọrụ na
nwere naanị ndị ọrụ ole na ole. Ndị ọzọ na-emepe emepe mbanye anataghị ikike nwere ike ịmịpụta hacks dị ala, mana anyị na-elekwasị anya mgbe niile na iweta ngwa ọrụ a pụrụ ịdabere na tebụl.
Kedu ihe kpatara anyị PUBG Aimbot
Nri PUBG ziri ezi ga - emeri egwuregwu gị ozugbo, ebe ị ga - enwe ike ịgbapụ karịa nkenke ọ bụla na ebe obibi gị. Onwere mmadu ole na ole no n’uwa nwere ike ikwu na ha nwere izi ezi nke robot n’enweghi enyemaka ngwa oru, obi di gi uto na iburu gi onye n’adighi nma ihi ugha iji bia n’iru (nri?)
Kedu ihe kpatara anyị PUBG ESP
Iji PUBG ESP bụ ụdị kachasị dị irè nke idobe onye iro gị taabụ, ebe ọ bụ na ha enweghị ike zoo mgbe ị hụrụ nke ọma site na ntọala siri ike na nke adịghị mma. You'll ga-enwe ike ịhụ aha ndị egwuregwu, yana ahụike ha hapụrụ na ọbụlagodi ngwa ọgụ ha na - eji - ọ bụrụ na nke ahụ ezughi oke, enwere ọtụtụ nhọrọ ESP ndị ọzọ ịhọrọ .
Gịnị kpatara anyị PUBG Wall Hack
Achọpụtaghị Mgbakwunye Mgbakwunye anyị na - enye gị ohere ịnwe aka dị elu na - etinye akaụntụ gị n'ihe egwu. Ihuenyo enweghị ozi na-enweghị usoro mgbe ị gbanyere PUBG Wall Hack, ebe ihe niile ị hụrụ ga-aba uru - Gamepron na-enye gị ihe niile achọrọ iji merie!
Kedu ihe kpatara PUBG Norecoil anyị
PUBG bụ egwuregwu na-enweghị mgbaghara, nke pụtara na ị ga-etiri mkpu na ihuenyo n'ihi ntakịrị nsogbu. N'ikwu nke a, nkwụghachi bụ nsogbu dị oke egwu, mana yana nke ị nwere ike wepu mgbe ị na-eji PUBG Hack. Ọbụlagodi ebumnuche gị mere ka mgbatị gị gbaa ọsọ ma nwee ike iwepụta ndị nwere egwuregwu kacha nwee ọnụ ụlọ gị.
Etu esi ebudata ihe kacha mma PUBG hacks?
Anyị na-enye gị ohere ịbanye na hacks site na iji igodo ngwaahịa, ha niile na-enye gị ohere iji naanị Gamepron oghere maka egwuregwu kachasị amasị gị. Anyị PUBG Hacks nwere ike ibudata ozugbo ịzụrụ ma rụọ ọrụ igodo ngwaahịa gị, n'agbanyeghị oge ị họọrọ.
Kedu ihe kpatara nsogbu PUBG gị ji dị oke ọnụ karịa ndị ọzọ
Achọpụtaghị anyị PUBG Hacks kpamkpam, nke pụtara na akaụntụ gị agaghị anọ n'ihe egwu mgbe ị na-aghọ aghụghọ. Imirikiti ndị na-enye ọrụ ga-asị na ha nwere nchedo aghụghọ na ị ga-akwụsị iwu n'agbanyeghị, mana anyị na-enye 100% aghụghọ aghụghọ a na-achọpụtabeghị. Ọbụghị naanị nke ahụ, mana aghụghọ anyị dị na sọsọ naanị.
Anyị nwere igodo ngwaahịa ndị kwesịrị maka onye ọ bụla! Ma ị na-achọ kwa ụbọchị, kwa izu, ma ọ bụ ọbụna kwa ọnwa igodo, anyị nwere ike nyere aka jeere gị ozi kachasị mma. Anyị achọghị ka ndị ọrụ anyị belata ma ọ bụ ya mere anyị ji edebe ihe na-agbanwe, na-enye gị ohere ịzụta ohere na oge ị họọrọ.
Awesome PUBG Hack atụmatụ